Na-ebi na ebe ngosi ihe mgbe ochie, Artist's Estate | Nchọpụta Pụrụ Iche, uslọ Ndị Na-adịghị Ebu Maka Arịrịrịrị
Bie na Museum, ,lọ Ala
Home » Ndepụta » Bie na Museum, ,lọ Ala
Sq Na: 2800
Ala na-achọsi ike Artist na Museum nke Robert E. Kuhn (1917-2000)
N'akụkụ Shenandoah National Park, nke a bụọ bụ A na-ere ụlọ Artist maka ire ere, gụnyere nka izizi nwere atụmatụ emere ihe ruru $ 3.5 Million, site na ezigbo nka - eserese, eserese, mbipụta na ihe ọkpụkpụ, edemede okike - mmemme mbụ jazz.
Otu oge na ndụ ohere ịnwe saịtị akụkọ ihe mere eme "Tanners Ridge Mission (1921-1966)" yana ụlọ ngosi ihe nka nke ụlọ na nkeonwe nke ihe osise mbụ Robert E. Kuhn na ezinụlọ.
“Ihe onwunwe” Na 3000 ′ elu, ebe a 4.50 acre bụ ọnọdụ zuru oke maka Kuhn iji mepụta ihe nketa ya. A gbahapụrụ ozi ahụ. Kuhn mechara zụta ma rụzigharị ụlọ atọ ahụ, na-eme ka ha bụrụ ụlọ obibi ndị ọbịa dị iche iche ma gbanwee ihe ndị dị n'ime ime obodo ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nka ya. Kemgbe ọ nwụrụ na 2000, ụmụ nwoke atọ nyefere ya ikike.
“Chọọchị” bụ “ụka” ikpeazụ dị na Shenandoah National Park dị 200,000 acre. Ọ na-arụ ọrụ dịka ime ụlọ atọ na-akpata ego ezumike ezumike nke naanị enwere ike ịkọwa dị ka "ịtụnanya n'ezie", ya na ime ụlọ niile nke "ụka" na-egosipụta eserese eserese na nke mbụ n'echiche, eserese, ihe osise, na arịa ụlọ!
Okwute ulo “parsonage” nwere mgbakwunye ndị jere ozi dị ka ebe a na-eme ihe / studio maka ihe ọkpụ na ihe osise Robert Kuhn.
Nkume "na-eme" ụlọ bụ studio / gallery zuru ezu na otutu skylights. Ma “ihe omume” na nke “parsonage” ụlọ nwere ike ịbụ ọzọ mgbazinye nkeji ma ọ bụrụ na rụzigharịa. Ma ọ bụ, onye na-azụ ihe omenka nwere ike ịhọrọ iji ihe ngosi ahụ mee ihe dị ka ụlọ ọrụ nzuzo!
Ogige Ubi bụ ihe ngosi nka nke 2.75 acre nke juputara na ihe osise di egwu, nke nwere ike nwee ekele ka ị na-agabiga n'etiti ha. N'ịgbasa n'etiti nkà ị nwere ike ịhụ olulu ịnyịnya na-atụba olulu tinyere ọtụtụ ebe dị egwu maka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ. Gụnyere ihe dị ka 50 mbụ, otu ụdị ihe osise ga-abụ akụkụ nke ala a.
“Ọrụ m, ihe osise, na ihe ọkpụkpụ m dị mfe nghọta. Ebumnuche abụghị iwulite ezigbo eserese nke isiokwu, kama ịkewapụta omume na ike nke na-enye ndụ na mmadụ. Ana m anwa ime nke a site na iji ahịrị. Mgbanwe bụ ngwa m na-eji enyere aka imezu ebumnuche m. ” Robert E. Kuhn
Kumụ nwoke atọ Robert Kuhn gosipụtara nkà nke aka ha n'onwe ha yana ụfọdụ ọrụ ha ka a na-ahụkwa ebe a. Nke kacha ochie bụ James P. “Obi ”tọ” Kuhn, onye rụchara ọrụ imepụta akwụkwọ a ma ama nke akpọrọ “Happy the Artist” na mpaghara Richmond, Virginia ebe a na-egosipụta ọtụtụ n’ime ya. Onye na-esote ya bụ Nathan D. Kuhn, onye ọkpụ “Pop” bụ onye gosipụtara mba niile na Warhol, Lichtenstein, Rivers, Dine, Hockney, na Oldenburg. Nathan bụkwa Jazz-Harmonists na ya na nwunye ya, Iluminada, bụ ndị isi nchịkwa nke Artist Estate. Nwa nwoke nke atọ bụ Daniel R. Kuhn, onye edemede dere, Onye na-emepụta ihe nkiri, na Jazz Agent. Dan na-elekọta ma na-echekwa ogige 2.75 acre dị n'akụkụ.
Churchlọ ụka a gbanwere agbanwe na-enye usoro nhazi oghere na ụlọ elu katidral. Ogwe mmanya na tebụl agbatị na igwe anaghị agba nchara nke oge a na-enye ihe niile achọrọ iji nwee ọ prepareụ ma kwado usoro nri gourmet na kichin zuru oke. Ihe na-atọ ụtọ, catwalk omenala na-eduga gị site na ime ụlọ nke abụọ nke ime ụlọ gaa n'ọnụ ụlọ nwere ime ụlọ ịwụ zuru oke. Floorlọ nke atọ 'Angel-room' ga-ahụ ụmụaka n'anya. Bilie na-enwe ume ọhụrụ ma buru kọfị ụtụtụ gị pụọ na mbara ihu nke abụọ, na-ele azụ azụ mara mma na ogige mara mma.
Ihe onwunwe a nwere ụkwụ 450 nke ụzọ ụzọ ma ọ bụ naanị 13 kilomita site na Luray Caverns, bụ isi ebe ndị njem nleta na Virginia. Elu elu dị "ụkwụ 3,000" dị jụụ na naanị nkeji 45 site na Skyline Drive.
Dị nnọọ gafee okporo ụzọ, enwere ohere ịnweta Ogige Ntụrụndụ Shenandoah, juputara na otutu uzo di iche iche na ebe ndi ozo. Nyochaa ogige ahụ site na iji ụkwụ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe; azụ, na ụgbọ epeepe na mmiri. Were njem njem kilomita 2.5 gaa n'okporo ọkụ nke ogige ahụ wee mechaa ụbọchị ahụ site n'imeso onwe gị iri nri mara mma na nnukwu Meadows Resort, nke na-adọta ihe karịrị ndị ọbịa 2 kwa afọ.
Gbọala ihe dị mfe 10 gaa obodo Stanley ebe ị nwere ike ịga ije na Main Street wee kwụsị na ụlọ oriri na ọ localụ localụ dị ka The Hawksbill Diner maka obere abalị.
Nyochaa mpaghara ndị gbara ya gburugburu ma chọpụta ahụmịhe mmanya pụrụ iche na Wisteria Farm & Vineyard gbara gburugburu Blue Ridge Mountains. N'ịbụ onye amaara maka ọmarịcha ịma mma ime obodo ya, mmanya a na-a farmụ mara mma na-akpọ gị òkù ka ị gaa nri, soro otu ìgwè atụrụ Romney gaa n'ugbo ahụ ma zuru ike n'akụkụ ekwú ọkụ na ime ụlọ ahụ. Mgbe ị na-apụ, gbaa mbọ hụ na ị gara Mindrolling Lotus Garden ebe ị ga - ahụ otu ogige Buddhist mara mma na atụmatụ ụlọ dị mma.
Mee Onye nwe ma ọ bụ onye nnọchi anya m
Hụ ụlọ ndị ọzọ anyị gbanwere na Church
Ahịa: $ 1,500,000
Okwu: 3434 Tanners Ridge Road
Koodu mpaghara: 22851
Ala: 3 Buildlọ Dị Iche
Ụkwụ Square: 2800
Ime ụlọ: 5
Adreesị ma ọ bụ Obodo*
Tinye adreesị ma ọ bụ obodo nke ihe onwunwe
Aha gị na aha ikpeazụ gị*
Nọmba ekwentị (Contactzọ Mkpọtụrụ Ọsọ!)
Azịza gị ma ọ bụ ajụjụ
Nke gara agaHouselọ ọkụ maka ire ere - YE OL FI RELỌ ỌR.Ihe na-esoteChọọchị tụgharịrị akụkọ ihe mere eme
Houselọ ọkụ maka ire ere - YE OL FI RELỌ ỌR.
Chọọchị tụgharịrị akụkọ ihe mere eme